काठमाडौं । डा. गोविन्द केसी १६ औंं आमरण अनशन बस्ने तयारीका लागी इलाम पुगेका छन् । । उनले पौष २५ गते (भोली) सम्ममा सरकारले आफ्ना मागलाई सम्बोधन गरेन भने २५ गते बेलुका चार बजे पछी अनशन शुरु गर्ने बताए । गत साउन १० मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधनमा सहमति भएको थियो । उक्त विधेयक लामो समयसम्म पनि संसोधन नभएपछि १६औं सत्याग्रह बस्ने तयारीमा...
काठमाडौं । नेपाली बजारमा १ हजार ३ सय प्रकृतिका औषधि बिक्री भइरहेका छन् । तर, तीमध्ये बढी प्रयोगमा आउने ९६ प्रकृतिका औषधिका मात्र अधिकतम मूल्य निर्धारण गरिएको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ । बाँकी १ हजार २०४ प्रकृतिका औषधिको मूल्य निर्धारण नै भएको छैन । ती औषधि मूल्य निर्धारणबिना नै बिक्री भइरहेका छन् । विभाग आफैं क्रियाशील नहुँदा पनि...
काठमाडौं । महिलाहरूलाई यौनको आवश्यकताबारे विभिन्न अध्ययनहरु भएका छन् । एक अध्ययनका अनुसार, महिनावारी पूरा भएको पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्मको अवधिमा महिलालाई सहवासमा बढी आनन्द आउँछ । जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ बेम्बर्गनका अनुसन्धाताहरू एक हजार युवा र युवतीमा सर्वेक्षणपछि उपयुक्त निष्कर्षमा पुगेका हुन् । सहभागीहरूलाई महिलासँग कुन समय...
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले बुधबारदेखि सुरु गर्ने भनिएको सत्याग्रह यही पुस २५ गतेसम्म स्थगित गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा अल्झिरहेका बेला डा. केसी सत्याग्रहमा बस्ने भन्दै मंगलबार पूर्वी पहाडी जिल्ला इलाम आएका थिए । इलाममा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले एक...
काठमाडौं । गर्भपतन गराउने सयजनामध्ये ५८ महिलाले असुरक्षित ढंगबाट गर्भपतन गराउने गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार महिलाले गर्ने गर्भपतनमध्ये ४२ प्रतिशतले मात्र सुरक्षित विधि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार गर्भपतन गराउने सय जनामध्ये ४२ जनाले मात्र सुरक्षित विधि अपनाउने गरेका छन् । नेपाल...
काठमाडौं । सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–३ शिवगञ्ज टोलमा बीसीजी खोप लगाउँदा एक महिने शिशुको बिहीबार मृत्यु भएको छ । खोपका कारण स्थानीय शिवु खत्वेको एक महिने छोरा शिवमको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानेन्द्रप्रसाद फुँयालले जानकारी दिए । शिशुलाई दिउँसो १ बजेको समयमा स्वास्थ्यचौकी...
हुम्ला । जिल्लाकै मध्यक्षेत्रको सर्केगाड गाउँपालिकाबाट केन्द्रबाट प्राप्त हुने शसर्ततर्फको बार्षिक विनियोजित बजेटको अभावले महिलाहरु उधारोमा प्रसूति भत्ता स्वीकार्न बाध्य छन् । नियमअनुसार हिमाली क्षेत्रमा महिलाले बर्थिङ सेन्टरमा बच्चा जन्माएपछि १ हजार ५ सय रुपैंयाँ प्रसूति भत्ताबापत पाउन ब्यवस्था छ । यो भत्ताको ब्यवस्था...
काठमाडौं । बंगलादेशमा कालो सूचीमा परेका ३७ मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरिरहेका ६ सयभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले त्यस्ता कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले मुलुकमा चिकित्सकीय अभ्यास गर्न अनुमति नपाउने स्थिति आउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । काउन्सिलका अनुसार हाल मुलुकबाहिर सबैभन्दा बढी मेडिकलका...
काठमाडौं । मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकामा एक १२ वर्षीया बालिका गर्भवती भएको पाइएको छ । ११ वर्षमा विवाह भएकी बालिकाको पेटमा ८ महिनाको बच्चा भएको घटना सार्वजनिक भएसँगै यसप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयलेसमेत चासो देखाएको छ । बालिकाको थप स्वास्थ्य परीक्षणका लागि काठमाडौं लगिएको छ । काठमाडौं ल्याएर थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा राखिएको छ...
आफूखुशी एन्टिबायोटिक खाँदा ज्यान जान सक्छ !
काठमाडौं । रुघाखोकी लाग्यो, ज्वरो आयो वा झाडापखाला भयो भने के तपाई आफूखुशी मेडिकलबाट औषधि किनेर खाने गर्नुभएको छ ? सावधान ! यसो नगर्नुहोला । जथाभावी एन्टिबायोटिकको प्रयोगले ज्यान पनि जान सक्छ । चिकित्सकका अनुसार एन्टिबायोटिक विरामीले आफूखुशी किनेर खाने, औषधी पसलेले जथाभावी बेच्ने तथा स्वाथ्यकर्मीले पनि विरामीको राम्रोसँग परीक्षण नै...
यसरी थाहा पाईन्छ गर्भमा छोरा छ कि छोरी ?
काठमाडौं । छोरा या छोरी दुवै समान हुन् । हाम्रो समाजमा छोरा र छोरीमा गरिने भेदभाव तथा गर्भपतनका कारण गर्भवती महिलाको पेटमा रहेको बच्चाको लिङ्ग परिक्षण गरिनु गैरकानुनी मानिन्छ । तर, यदि भेदभावको दृष्टिकोणले नभई उत्सुकता मेटाउनको लागि छोरा र छोरी के छ भन्ने जानकारी लिन चाहेमा आफैले घरमा पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। यदि गर्भमा छोरी छ भने...
विश्वमा झन्डै ४५ करोड मानिस मधुमेह पीडित, गर्भवतीलाई जोखिम
काठमाडौं । विश्व मधुमेह दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी आज मनाइँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय मधुमेह संघले सन् १९९१ को नोभेम्बर १४ देखि मधुमेहले स्वास्थ्यमा पार्ने असर बारेमा जानकारी दिन यो दिवस मनाउन थालेको हो । विशेष गरी गर्भवती महिलामा मधुमेहको जोखिम बढ्दै गएको छ । तौल घट्नु, थकान बढ्नु, मुख सुख्खा हुनु र धेरै पिसाव लाग्नु मधुमेहको मुख्य लक्षण...
काठमाडौं । यौन चाहना नहुने विभिन्न कारण हुन्छन् । जसमध्ये सबैभन्दा प्रमुख कारण रागरसको गडबडी हो । त्यस्तै व्यक्तिले उच्च रक्तचाप, मनोद्दिपक (मानसिक रोग) को औषधि र मधुमेहको औषधि सेवन गरेको अवस्थामा पनि उसमा यौन चाहना नआउन सक्छ । यसका साथै आफ्नो दिनचर्या निकै व्यस्त हुने व्यक्तिमा थकान र विभिन्न तनावले मानसिक रुपमा तयार नहुनाले पनि...
यी हुन् महिलालाई मनपर्ने यौन सम्पर्क शैली
एजेन्सी । कुन मानिसलाई कस्तो खालको यौन सम्पर्कको शैली मन पर्दछ भन्ने कुरा समग्रमा भन्न गाह्रो हुन्छ । हालै एउटा अनलाइन डेटिङ साइटले यस विषयमा अनलाइन सर्भेक्षण गरेको छ । महिलाहरुलाई यौन सम्पर्कका बेला के गरेको मन पर्दछ ? कस्तो खालको संसर्गको शैली मन पर्दछ ? अनि सेक्समा के कुराले मूड अन गरिदिन्छ ? भन्ने विषयमा सोधिएको थियो । उक्त अनलाइन...
गर्भ जँचाउनेलाई अण्डा उपहार
ओखलढुंगा । जिल्लाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका– ५ की शर्मिला मगर ६ महिनाकी गर्भवती हुन् । उनले ४ र ६ महिना गरी दुईपटक स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच गराइसकेकी छन् । यसरी गर्भ जाँच गराउँदा उनले गर्भावस्थामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, खतराका चिन्ह, पूर्वतयारी तथा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुँदा हुने फाइदाका विषयमा जानकारी मात्र पाइनन्, उपहार...